#budget Archives - Page2of2- Sawal Nepal
कस्तो होला आज बजेट ? यस्तो छ अर्थविद्हरूको भनाइ
चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा कम नै बजेट खर्च हुने देखिएकाले १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरी १३ खर्बको बजेट ल्याउनु उचित हुने अर्थविद्हरूको भनाइ विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । चालू वर्षको खर्च र आगामी वर्ष उपलब्ध हुन सक्ने
कर्मचारीलाई ‘सरप्राइज’ दिएको त्यो बजेट
१५ जेठ, काठमाडौं । अहिले उच्च पदमा रहेका धेरै सरकारी कर्मचारीले ०५७/५८ ताका भर्खर करिअर सुरु गरेका थिए । कोही नायव सुब्बा त कोही भर्खरै शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारका पालामा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले निजामति कर्मचारीलाई ‘सरप्राइज’ दिए । त्यसबेला नासुको तलव स्केल मासिक
नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट सार्वजनिक २००८ सालबाट भएको पाइन्छ । मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले २००८ सालमा सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट हो । सुवर्णले संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको थियो